सर्वश्रेष्ठ मूल्य अप्रेंटिस हेयरड्रेसिंग कैंची
अप्रिल 30, 20194मिनेट पढ्ने 1 टिप्पणी
तपाइँले जहिले पनि $ 500 खर्च गर्नु पर्दैन जोडीले तपाइँलाई प्रो जस्तो काट्न मद्दत गर्दछ!
प्रशिक्षुहरू र विद्यार्थीहरूको लागि उत्तम हेयरड्रेसि sc कैंची अक्सर समावेश गर्दछ:
एक उचित आकार सबै भन्दा कपाल काट्ने तरिकाहरु लाई समेट्छ: सामान्यतया .5.5. "" वा ""
कडा स्टील यसले ब्लेडलाई लामो समयसम्म तेज राख्दछ, त्यसैले तपाइँ कैंची शार्पनरको साथ अगाडि पछाडि भाग्नुपर्दैन
अफसेट एर्गोनोमिक ह्यान्डलहरू अन्तमा घण्टा कटौती गर्दा थकान कम गर्दछ
बेभेल वा उत्तल किनारा ब्लेड
सफाई, तेल र मर्मत किटहरू
उत्तम ब्राउज गर्नुहोस् कपाल कैंची सेट र किट्स यहाँ!
प्रशिक्षु र छात्र कपालका लागि केहि शीर्ष-बिक्रि ब्रान्डहरू हुन्:
नतिजा अप्रेंटिस काट्ने र पातलो कैंचीको जोडी हो जुन तपाईं वास्तविक प्रो बन्नको लागि अभ्यास गर्दा तीखो रहनेछ।
हामी प्रत्येक हप्ता विद्यार्थी र प्रशिक्षुहरूको लागि उत्तम मूल्य कैंचीको बारेमा सोधिन्छ, त्यसैले हामीले हाम्रो शीर्ष best उत्तम प्रशिक्षु कैंची सूची राख्ने निर्णय गरेका छौं।
तपाईं यहाँ अप्रेन्टिस र विद्यार्थी हेयरड्रेसि sc कैंचीको पूर्ण संग्रह पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
अप्रेन्टिस कैंची संग्रह
शीर्ष Best उत्तम प्रशिक्षु र विद्यार्थी कैंची
विद्यार्थी र अप्रेन्टिस कपालका लागि उपलब्ध कैंचीको सूचि विशाल छ, त्यसैले हामी विगत केही वर्षहरूमा बेचिरहेका सबै भन्दा लोकप्रिय मोडेलहरूसँग टाँसिरहेका छौं।
यस बारेमा पढ्नुहोस् यहाँ उत्तम हेयरड्रेसि sc सिंची ब्रांडहरू!
यी कैंची पेशेवरहरूको र शिक्षुहरूको उच्च स्तरको सन्तुष्टि संग पैसाको लागि उत्तम मूल्य हो।
1) Jaguar जे 2
यी जे2Jaguar कैंची सजिलै पैसाको लागि उत्तम मान हो। तिनीहरू यति लोकप्रिय छन् कि तिनीहरू लगातार दुई वर्षको लागि हाम्रो शीर्ष बिक्रिको जोडी हुन्।
तिनीहरूले हाम्रो सबै प्रशिक्षु कैंची आउट आउटल्ड गरे र उच्च सन्तुष्टि र यूरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र एशियामा सबै भन्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया छ।
बाट अधिक ब्राउज गर्नुहोस् Jaguar यहाँ कैंची ब्रान्ड!
तिनीहरू आरामको लागि आधारभूत अफसेट एर्गोनोमिक्स, तीखो बेभल एज ब्लेड र एक जर्मन स्क्रू प्रणाली प्रयोग गर्दछ जुन तिनीहरूलाई कस्बा राख्छ।
ह्यान्डल स्थिति ओफसेट
आकार .5.5. "" र "" ईन्चहरू
तिक्खर स्लाइस कटिंग एज
ब्लेड क्लासिक ग्रिन्ड ब्लेड
वस्तु नम्बरहरू JAG J5055 & JAG J5060
2) Mina म्याट ब्ल्याक
दोस्रो मात्र Jaguar लोकप्रियता मा जे २, Mina म्याट ब्ल्याक केश कपालको सबैभन्दा किफायती र उत्तम मूल्य सेटको रूपमा बिक्री गर्दछ।
उत्तम ब्राउज गर्नुहोस् Mina Scissor ब्रान्ड अनलाइन!
तिनीहरू एक आधारभूत कालो डिजाइन, आराम को लागी एर्गोनोमिक्स अफसेट र जापानी शैली पेंच तनाव प्रणाली लामो ब्लेड कडा राख्नको लागि।
ह्यान्डल स्थिति अफसेट एर्गोनोमिक्स
आकार "" ईन्चहरू
ब्लेड उत्तल एज
खत्म एलर्जी - तटस्थ कोटिंग
WEIGHT G२ ग्राम प्रति टुक्रा
Mina म्याट ब्ल्याक
3) Jaguar पूर्व शैली
२०० under मुनिको तेस्रो सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने हेयरड्रेसि sc सिंची हो Jaguar पूर्व शैली श्रृंखला। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, प्रि शैली एर्गो पी सबैभन्दा लोकप्रिय मोडल हो।
यी पछि सबै भन्दा बढी प्रयोग गरिएको प्रशिक्षु कपाल काट्ने सिंची हुन् Jaguar जे २. प्राय जसो हेयरड्रेसि sc कैंचीको तुलनामा, प्रि स्टाइल एर्गो र प्रि स्टाइल रिलक्स कैंचीले हल्का महसुस, सटीक काट्ने, र प्रीमियम गुण प्रदान गर्दछ।
ह्यान्डल स्थिति प्रि स्टाईल एर्गो
आकार २. "", "" र ""
तिक्खर माइक्रो सेरेसन ब्लेड
खत्म साटन समाप्त
वस्तु नम्बरहरू JAG 82650, JAG 82655 & JAG 82660
Jaguar पूर्व शैली
4) Mina कामी कपाल कात्री
Kami कपाल कैंची नयाँ जोडी हो Mina। तिनीहरूले तीखी काट्छन् र आधारभूत अफसेट एर्गोनोमिक्स छन् जुन लामो समयको लागि काट्दा तपाईंलाई सहज राख्छ।
ह्यान्डल डिजाइन हेड-टर्नर हो, तर समग्र गुणस्तर र जापानी स्टीलले यी बनाउँदछ जुन यी बिक्रीलाई कायम राख्छ।
5) Jaguar गुलाबी पूर्व शैली
गुलाबी पूर्व स्टाइल कैंचीहरू २०२० मा सबैभन्दा लोकप्रिय अप्रेन्टिस कैंची हो। तिनीहरूलाई उनीहरूको उच्च-गुणवत्ता शिल्प कौशल र प्यारा सरलिक डिजाइनको आधारमा पुरस्कृत गरिएको छ।
यी सजिलैसँग धेरै किफायती र उत्तम मूल्य अप्रेन्टिस हेयरड्रेसि sc कैंची उपलब्ध छन् बिट शैलीको साथ।
आकार 5.5 "
साइड नोट: यो लेख को लागी, हामी संग कुराकानी गरीएको छ, वा प्रतिक्रिया प्राप्त गरीएको छ अप्टेंसीशिपक्यारियर, Training.com.au मा हेयरस्प्रेसिंग अप्रेंटिसिप गाइड र जापान कैंचीमा अद्भुत स्टाफ।
के आकार कपाल कात्रो तपाईं प्रयोग गर्नुपर्छ?
कपालका बहुसंख्यकहरूले their..5.5 "ईन्च र" "ईन्चको बीचमा आफ्नो कपालमा प्रयोग गर्दछन्। यिनीहरूले तपाईका सबै ग्राहकहरूलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि हेयरड्रेसि techniques्ग प्रविधिहरूको ठूलो संख्यालाई समेट्छ।
को बारे मा अधिक पढ्नुहोस्: कसरी उत्तम कपाल कैंची छनौट गर्ने!
तपाईंलाई कस्ता प्रकारका कैंची ह्यान्डलहरू आवश्यक छ?
Years० बर्ष पहिले कपाल हेयरड्रेसिंग क्लासिक ह्यान्डलहरूमा आउँथ्यो। अब हामी बुझ्दछौं कि तपाईको कलाई र कुहिनोमा स्ट्र्याम्पिंग र तनावहरूले स्थायी क्षति निम्त्याउन सक्छ, अफसेट एर्गोनोमिक ह्यान्डलहरू उपलब्ध छन्।
यस बारेमा पढ्नुहोस् हेयरड्रेसि sc कैंचीका विभिन्न प्रकारहरू उपलब्ध छन्!
किन यति धेरै विद्यार्थीहरू र अप्रेन्टिसहरूले हेयरड्रेसि sc कैंची अनलाइन खरिद गरिरहेछन्! जापानसिसिजरमा नाई र कपालका लागि सर्वश्रेष्ठ केश कात्तीहरू पाउनुहोस्!
मलाई बिद्यार्थी र प्रशिक्षुहरुको लागी नराम्रो लाग्छ। उनीहरुलाई केहि गुणस्तरीय कपाल काट्ने कैंची चाहिन्छ तर सम्भवतः धेरै पैसा छैन जब उनीहरु विद्यालयमा छन् वा भर्खरै भंग गरीरहेछन्। मलाई लाग्छ कि यो लेख पहिलो पानामा पिन गरिनु पर्छ किनभने यो विद्यार्थी र प्रशिक्षुहरु को लागी केहि उपयोगी जानकारी छ।